တရုတ်ပြည်မှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်သို့ အလှူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » တရုတ်ပြည်မှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်သို့ အလှူ
တရုတ်ပြည်မှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်သို့ အလှူ
Posted by Phaung Phaung on Jan 12, 2012 in Think Different | 10 comments
ဟိုတလောက တရုတ်ပြည်မှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် မြန်မာပြည်သို့ ကြွရောက်အပူဇော်ခံပါတယ်။ ကဘာအေး ( ပဆင့်တွေရိုက်လို့မရ) ကုန်းမြေထိ သွားရောက်မဖူးမြော်ဖြစ်ပေမယ့် တီဗီကနေ နေ့စဉ်ဖူးမြှော်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အရမ်းလဲကြည်ညိုမိပါတယ်။ အဲဒီမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘယ်လောက်အလှူအတန်း ရက်ရောသလဲ ၊ သဒါတရားရှိသလဲဆိုတာ တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ မိမိဝတ်ထားတဲ့လက်ဝတ်ရတနာကို ချွတ်လှူတဲ့ ပုဂိုလ်တွေလည်း အများကြီးပါ ။ သိန်းဂဏန်းနဲ့ လှူတဲ့ပုဂိုလ်တွေလည်း ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလေးတွေ လက်ခံပြီး ပိတိဖြာနေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အဲလောက်တော့ မလှူနိုင်ပါဘူး ..လှူနိုင်တဲ့လူတွေကို ချီးကျူးမိပါတယ် .. ( အော် … ဒီ အလှူခံရရှိငွေတွေကိုတော့ မြန်မာ့သာသနာရေးမှာ အသုံးပြုမှာပဲလို့ ကိုယ့်ဘာသာတွေးတာပေါ့နော် …. ) အဲဒီအချိန်မှာ ဒီလှူဒါန်းငွေတွေကို မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွက် မြန်မာအစိုးရက တရုတ်ကို လျှော်ကြေးပေးဖို့ သဘောတူပြီးသား ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေလည်း ကြားနေရပါတယ်။
အဲနောက်တော့ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်အတွက် အလှူခံရရှိသော ရွှေငွေကျောက်မျက်ရတနာများနှင့် ငွေသားများကို တရုတ်ဘုန်းတော်ကြီးထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်တယ်ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ကိုယ်လဲမလှူရပါဘဲနဲ့ အဲဒီအပေါ်မှာ အတ်တဆန်စွာနဲ့တွေးကြည့်မိတယ်။ တို့နိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး မပြည့်စုံတဲ့ ပရိဟိတဂေဟာတွေ ၊ ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းတွေ၊ သီလရှင်စာသင်တိုက်တွေ ၊ မိဘမဲ့ဂေဟာတွေ ၊ စိတ်ကျမ်းမာရေး ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာတွေ ၊ ဆေးရုံတွေ တပုံတခေါင်းကြီး လှူစရာနေရာတွေအများကြီးရှိရက်နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးက အခုလိုများဝိုင်းပြီး ရက်ရက်ရောရောလှူလိုက်ကြရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ပါ … ( ဗုဒ္ဓစွယ်တော်နဲ့ယှဉ်လို့မရဘူးပေါ့လေ ) ဘုရားကိုရည်စူးပြီး လှူဒါန်းတာမှန်ပေမယ့်လို့ တရုတ်ပြည်ကရသွားတာကိုး …….
Phaung ကတောလေ …… ဘတ်စကားစီးရင်း/ သွားရင်း လာရင်း တွေ့တဲ့ ယောဂီအိုကြီးတွေ ၊ သီလရှင်ဆရာကြီး/လေးတွေ၊ ဘုန်းကြီးအိုကြီးတွေ ၊ လမ်းမှာတောင်းရမ်းနေရတဲ့ အဘိုး/အဘွားအရွယ်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် 100 ကနေ 500/1000 ထိ ကြုံတိုင်းလှူဖြစ်တယ် …ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လေးပေါ့
တီဗီကနေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတွေနဲ့လှူနေကြတာကိုတွေ့ရလို့ မိမိအမြင်နဲ့အတွေးလေးကို တင်ပြမိတာပါ…
သိပါဘူးသများက အဟောင်းကြီးလားလို့ 
ကိုဖောင်း စိတ်ဓာတ်လေး လေးစားပါတယ်ဗျာ..
ကိုယ့်အလှည့်ကျရင်သာ..လုပ်သင့်တာလုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့ လို့ ပဲ ပေါပါရစေခင်ည
တစ်ကယ်တော့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ ဘုရားအတွက် အဲတာတွေ မလိုတော့ပါဘူးဗျာ..
ကျနော့် အထင်ပြောရင် ရုပ်ဝတ္ထုတွေဘာမှ လိုတော့ဘူး..
ဘုရားကို တစ်ကယ်ကြည်ညိုရင် ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်း..ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ ပဲ လိုပါတယ်..
ရွှေတွေ..ငွေတွေ..သွားလှူလို့ ..ဘုရားက ဘာပြုလို့ ရမတုန်း.
ရွှေငွေထီးနန်းကိုစွန့် ပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် သွားနေတာ..
လှူချင်သပ..ကူညီချင်သပဆို..နီးစပ်ရာ တစ်ကယ်ဒုက္ခရောက်နေသူ…အခက်ခဲဖြစ်နေသူတွေကို ကူညီလိုက်
သူအဆင်ပြေသွားတာကြည့်ပြီး ဘလောက်ပီတိဖြစ်ဖို့ ကောင်းသလဲ…
ကိုယ်ဖော့ပညာကောင်းလှချည်လား… နောက်ကလိုက်လာတာ ဆံချည်မျှင်တစ်စိတ်လောက်ကျ ကပ်လွတ်သွားတယ်… လှူချင်လို့လှူတာမဟုတ်ဘူး (ဗွက်ပေးမယ်ဆိုလို့လှူတာ)…. နောက်တစ်ခါလာပြောရင်တော့ ပေါက်ဖော်ရော၊ ဘာသောနားမလည်ဘူး… ဂမုန်းတစ်ထောင်စားပြီးကျင့်ထားတဲ့အတွင်းအား နဲ့လှမ်းထုလိုက်မယ်။ ဒါပဲ (မကြားတော့မှာ စိုးလို့ကုန်းအော်ရတာ လိပ်ခေါင်းတောင်နည်းနည်း……….) ပြေးပြီ ဖလပ်…ဖလပ်…ဖလပ်
ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် ပေါက်တဲ့ ဗုံးပဒေသာတွေ
နျူကလီးယားထိပ်ဖူးတပ် ဒုံးတွေနဲ့ ပစ်ပြီဟေ့
ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များပိုင်ရှင် (ဒီလိုဘွဲ့ရအောင် ပေးကျွေးထားရတာ) ….
ရုပ်စမ်း…ရုပ်စမ်း ဟုတ်ပါဘူး လုပ်စမ်းလုပ်စမ်း။ မြန်မာ့ရေဒါအားတိုးနဲ့ပြေးတာ… ဖလွတ်…ဖလွတ်…ဖလွတ်
အလှူ့ ဒကာ အဂ္ဂမဟာဂန္တ၀ါစက္ကပဏ္ဍိဘိဝံသအဘိဓမ္မာသရေစည်သူသီရိသုဓမ္မ မစ်ချတာပေ လာတော့မယ်..
အပြည့်အ၀ သဘောတူတယ်ဗျာ..ကျုပ်လဲ အဲဒီအလှူ သတင်းကြည့်ရတိုင်း..Phaung Phaung နဲ့တထပ်တည်း တွေးမိပါတယ်..
ဗမာတွေကလဲခက်တယ်ဗျာ..ဘုရားလှူ မှ ကုသိုလ် ပိုရတယ်လို့ ယုံကြည်နေကြတာကိုး..
ဒီလိုပြောလို့ ဘုရားကိုမလှူရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး..ဘုရားမှာပြည့်စုံနေရင်တော်ပီပေါ့ဗျာ..ခုတော့အလွန်အကျွံ လှူကြ
ကျန်ွတော်တို့ သေသေချာချာ စဉ်းစားသင့်ကြပီထင်ပါကြောင်း..
ဖောင်းဖောင်း ကို လေးစားပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်ပေမယ့်မရဲလို့မပြောခဲ့ရဘူး။ခက်တာက ဘုန်တော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင် က
ဘုရားတည်နေကြတော့လည်း ပြောရခက်သဗျာ။တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ မလှူနိုင်ကြဘူး ဖြစ်နေကြတယ်။သားရှင်ပြု၊
ဘုရားပွဲ၊ကထိန်ပွဲ အစရှိတာတွေမှာလည်း တစ်ကယ်အလှူကနည်းနေပြီး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အနေနဲ့ပဲများနေသလားလို့။
ကြေးမုံလေးတို့အမျိုး ကိုရွှေတရုတ်ကြီးဖို့ပဲဗျာ..သဒ္ဓါပါတယ်။ ကြေးမုံလေးအတွက်ဆို ဦးကြောင်ကြီး ခန္ဓာကို (အသက်ဟုတ်ဖူးနော်) လှူပါတယ်။ တရက်သုံးသုံး တလသုံးသုံး သုံးနိုင်ပါတယ်ကွယ်။
ဦးဖိုးကျား ရဲ့ အခမဲ့ကူလီထမ်းခြင်း ဆိုကလားဘဲ
I early notice that case. I early want to know what the contract of religious minister Myint Maung and chief Buddhist Monk of China. But Myanmar religious minister was not explained about that returned from China . Previously, it wasabig problem with China . I think, religious Department or Minister should explain the people of Myanmar early.